Lazada.co.th Iikhowudi zekhuphoni
Ukongeza i-10% kwiVenkile yokuGcina kwi-400 THB yokuthenga Fumana ipesenti eyongezelelweyo ngeLazada.co.th Iikhowudi zekhuphoni ngo-Agasti 2021. Jonga zonke iiKhuphiswano zakutshanje zeLazada Thailand kwaye uzifake kuLondolozo kwangoko.
Ukongeza nge-10% kwiNaraya 750 THB yokuthenga ILazada ikwazisa ngokukhethekileyo usetyenziso rhoqo ngoku! Fumanisa iShedyuli yokuThengiswa kweLazada ePhilippines 2021. Qiniseka ukuba ugcine iphepha lamaphetshana kaLazada Rappler kwiibhukhmakhi zakho kwaye ube usexesheni ngevawutsha yakutshanje kunye nekhadi lokuthenga ngetyala njengeevawutsha zeBDO ngexesha le-11.11, 12.12, kunye nentengiso yeKrisimesi kunye noMnyaka omtsha.
Ukongeza nge-10% kwi-3000 THB yokuThengwa kweTotco Gcina imali oyichithayo kunye neekhowudi zevawutsha zeLazada kunye neekhuphoni zikaLazada ngexesha lokuthengisa kukaLazada 8.8. Skrolela kwiimpawu zakho ozithandayo ezifana nePanasonic, Superdry, Nike, Crayola, Dermalogica, Clinique, Baseus, Hasbro, Dettol, Huggies kunye nokunye ngelixa wonwabela izaphulelo ukuya kuthi ga kwi-90% OFF.
Ukongeza nge-8% kwi-1500 THB yokuThengwa kweTotco I-100% yokuSebenza kweKhowudi yeVawutsha yeLazada YAM, Iikhuphoni zikaJulayi 2021. I-80% yokuNikezela ngeLazada kwi-Elektroniki, kwiFashoni, njl.